सर्वोच्चको फैसला र अनुत्तरित प्रश्नहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन २५, २०७७ सम्पादकीय
हिजो सत्ता र शक्तिको प्रभावमा निर्वाचन आयोगले तत्कालीन सत्तारूढ वाम गठबन्धनका दुई दललाई एकीकरणपछि त्यस्तो नाम दियो, जुन पहिल्यै नै आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो । आफ्नो दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताधारीहरूले कोष्ठकभित्र (नेकपा) थपेकै भरमा हडपेपछि त्यसका नेता ऋषिराम कट्टेल सर्वोच्च अदालत जानु स्वाभाविक थियो ।
सर्वोच्चले आइतबार कट्टेलकै पक्षमा फैसला सुनाएर न्याय दिलाएको छ । तर, यो फैसला यत्तिकैमा टुंगिँदैन । यसले दुई पार्टीको नाम जुधेको विषयमा मात्रै न्याय–निसाफ सुनाएन, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नयाँ दलको अस्तित्व नै अस्वीकार गरिदिएको छ । संसद् विघटनको सन्दर्भको फैसलामा नेकपाको हैसियतलाई ‘मान्य ठानेको’ अदालतले अहिले फेरि एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ । कानुनविद्हरू भन्दै छन्– अदालतले मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला सुनाएको छ । आयोगले गरेको एउटा गडबडी सुल्झिँदा अरू अनगिन्ती समस्या सिर्जना भएका छन् ।
यो फैसला त्यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला हिजो एक भएका दुई दल फेरि फरक ढंगले दुवै चिरामा विभक्त भइरहेका छन् । यही प्रक्रियाकै कारण मुलुकको समग्र राजनीति प्रभावित बनिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । सजिलै बुझ्न सकिने संवैधानिक तथा कानुनी अभ्यास के हो भने— जहाँ अस्पष्टता छ, न्यायालयले त्यसलाई प्रस्ट्याउन व्याख्या गर्ने हो, भएका जटिलता फुकाइदिने हो र न्याय–अन्याय छुट्ट्याइदिने हो । यो फैसलाबाट भने सर्वोच्चले संविधानमा नयाँ धारा नै सिर्जना गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । न्याययाचना नै नगरिएको र आवश्यक पनि नपरेको विषयमा समेत अदालतले दायित्व लिन रुचि देखाएको छ । मुद्दा एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणको थियो तर सर्वोच्चले त नेकपाको दल दर्ता प्रक्रियालाई नै निष्तेज तुल्याइदिएको छ । सर्वोच्चले न्यायिक मनबाटै फैसला सुनाएको हुन सक्छ तैपनि यसबाट न्यायालयले राजनीतिक सक्रियता देखाएको जस्तो भान हुन्छ । न्यायिक निरुपण र राजनीतिको क्षेत्राधिकार कताकता बाझिएजस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्था देखिनु समग्र न्यायालयको साख र गरिमाकै खातिर पनि उचित होइन ।
खासमा, यो फैसलाले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू उब्जाएको छ । नामका सन्दर्भमा जे भए पनि र अहिले नेकपा टुटिसकेको अवस्था भए पनि यसबीचमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राजनीतिक रूपमा एकीकरण भएर एउटै दल बनेको सत्य हो । र, राज्यका निकायहरू यसका जानकार मात्र होइन, साक्षी नै पनि छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिमूलक थलोहरूमा नेकपा नामबाटै निर्वाचित भएकाहरूसमेत छन् । राष्ट्रिय सभा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनदेखि स्थानीय निकायका उपनिर्वाचनसम्ममा नेकपाबाट निर्वाचित हुनेहरू छन् । यो एकीकृत दलबारे अदालतसमेत जानकार थियो, केहीअघिको संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलामा उसले यसलाई स्विकारेको पनि थियो । सर्वोच्चले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसम्बन्धी फैसलामा यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भए पनि पछि उपधारा १ को व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यसको आशय, सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेपछि दुई दल एकीकरण भएकाले त्यसले एक दलको बहुमतको सरकारको स्वरूप धारण गरेको भन्ने नै हो । अब प्रश्न उठ्छ, के संवैधानिक इजलासले स्विकारेको विषयलाई सर्वोच्चकै दुई सदस्यीय इजलासले काट्न मिल्छ ? यसरी, नजिरको प्रतिकूल फैसला गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुँदैन ?
अहिले एकाएक अदालतले साविकका एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्र पहिचान गर्दा नेकपाको नाममा चुनाव जितेकाहरूको हैसियत के हुन्छ ? फेरि, एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा यसबीचमा निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दलहरू दर्ता भइसकेका छन् । साबिककै दलहरूले फेरि आ–आफ्नो नाम दाबी गर्दा नयाँ दर्ता भएका उही नामका दलहरूको अवस्था के रहन्छ ? र, सर्वोच्चको फैसलाले २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपालाई खारेज गरिदिएकाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल खारेज हुन के राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसारका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्दैन ? साथै, के यो फैसलाबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरूबीच नाम जुधे अर्को नाम दिन सक्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको छैन ?
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाका कारण जन्मिएका यस्ता प्रश्नहरूको समाधान दिएको छैन । अनुत्तरित सवालहरूको जवाफ दिनुपर्ने अदालत आफैंले अनेकौं प्रश्नहरूको बिस्कुन लगाइदिएको छ । निर्वाचन आयोगले सत्ता र शक्तिबाट प्रभावित भएर सत्ताधारीहरूलाई दिएको नाम अदालतले पुनः कट्टेललाई नै दिनु उचित भए पनि एक कदम अघि बढेर दिइएको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक अनिश्चयलाई गहिर्‍याइदिएको छ । अदालतले दुई पक्ष अझै एक भएर अघि बढ्न चाहन्छन् भने नयाँ प्रक्रिया अपनाउन सक्ने त भनेको छ, तर के यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिन्छ ? के अदालतले कुनै फैसला गर्दा त्यो कार्यान्वयनयोग्य छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दैन ? यसरी, दृश्यमा नदेखिएका थुप्रै जटिलता यो फैसलाले निम्त्याएको छ ।
अदालतको यो फैसलाबाट कुन पक्षलाई कस्तो राजनीतिक लाभहानि पुग्छ भन्ने प्रश्न प्रधान होइन । फैसलाबाट जन्मिएका प्रश्नहरूले उत्तर नभेट्दा निम्तिन सक्ने परिणतिका कारण कतै देशले बाटो बिराउने त होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । यही कारण कतै हाम्रो न्यायालयको गरिमामै आँच आउने त होइन भन्ने सवाल मुख्य हो । यी प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छन् भने, आइतबारअघिसम्म देशको राजनीतिक जटिलताको कारक राजनीतिक नै थियो अर्थात् राजनीतिक दलहरू नै थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेर अदालतले धेरै हदसम्म दिशाबोध गराएको पनि थियो । अहिले फेरि अदालतकै फैसलाका कारण मुलुकको राजनीतिक गाँठो थप बलियो बनेको छ । किन सर्वोच्चले एकीकृत दललाई अर्को नाम छान्ने सहज बाटो सुझाएन भन्ने प्रश्न यहाँ मननीय छ । अब असन्तुष्ट पक्ष फैसलाको पुनरावलोकनका लागि गए भने त पक्कै पनि सर्वोच्चले थप विवेक देखाउला नत्र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली कसरी अघि बढ्ला ? प्रश्न जति टड्कारो छ, उत्तर त्यति सहज छैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०७:४९